Ny Diapers alika tsara indrindra amin'ny toe-javatra rehetra | Dogs World
Nat Cherry | 22/11/2021 11:00 | Nohavaozina amin'ny 22/11/2021 11:31 | Fitaovana alika
Diaper alika dia vokatra tena manokana hitsaboana zavatra toy ny tsy firaharahiana na ny fahanterana, fa koa mba hanampy hampiofana ny puppies hiandry ny handeha ho any amin`ny efitra fandroana ary tsy hiala ny trano, manipy amboahaolo sasany.
Ao amin'ity lahatsoratra ity Ho hitantsika ny karazana diaper ho an'ny alika, ary koa ny fampiasana azy sy ny toro-hevitra sasany rehefa misafidy sy mampiasa azy ireo. Ireo dia diaper vita amin'ny toetra mitovy amin'ny fiarovana, fifehezana fofona ary fampiononana izay efa fantatrao, fa mety amin'ny anatomia ny alikanao.
Izy ireo dia azo alefa ary tonga amin'ny habe nefa tsy manelingelina ny fivezivezenaHo fanampin'izany, mamela toerana malalaka ho an'ny rambony sy ny tongony roa izy ireo, noho izany dia tsara indrindra izy ireo hisorohana ny alika izay eo am-panaovana fahazarana tsy hanimba ny zoron'ny fanaka na ny rindrin'ny tranonao.
Diaper TRIXIE ho an'ny ...
Mivoaka! Diapers alika ...
Diapers Croci C6028711 ...
Diapers vahaolana tsotra ...
1 Ny diaper tsara indrindra ho an'ny alika
1.1 Fonosana diaper 3 azo ampiasaina indray
1.2 Diapers alika lahy azo ampiasaina indray
1.3 Diapers tokana ampiasaina ho an'ny lehilahy
1.4 Fonosana Diaper Trixie Disposable
1.5 Diaper azo sasana ho an'ny vehivavy
1.6 Diaper super absorbent ho an'ny vehivavy
1.7 Underpads ho an'ny alika
2 Inona no atao hoe diapers alika?
2.1 Ho an'ny alika antitra
2.2 Ny tsy fitoniana urinary
2.3 Mampiofana puppies
2.4 Vehivavy amin'ny hafanana
3 Karazana diapers alika
3.1 Ho an'ny alika tsy mahazaka onitra
3.2 Taratasy fanadiovana landihazo
3.3 Diapia ekolojika
4 Torohevitra rehefa manao diaper
5 Aiza no hividianana diapers alika
Ny diaper tsara indrindra ho an'ny alika
Fonosana diaper 3 azo ampiasaina indray
Diapers PET MAGASIN ...
Ity fonosana ity miaraka amin'ny Diaper alika telo azo ampiasaina indray dia manana ny zavatra rehetra ilainao mba hisorohana ny loza sy ny tahotra amin'ny lamba firakotra, karipetra ary sofa. Izy ireo dia vita amin'ny lamba tena misoroka ary manana fehikibo elastika eo amin'ny andilany mba hanohanana azy ireo tsara kokoa. Izy ireo dia mikendry indrindra ho an'ny bitro amin'ny hafanana (izany hoe, amin'ny fadimbolana) ary kely ny habeny, na dia misy habe sy modely maro aza, manomboka amin'ny tena matotra ka hatramin'ny manaitra indrindra (izay misy sary dia tena mahafatifaty).
Ao amin'ny fanehoan-kevitra dia nanasongadina fa, na dia vokatra tsara aza izy ireo, maka fatiantoka ihany fa tsy mipipy be.
Diapers alika lahy azo ampiasaina indray
Diapers PET MAGASIN ho an'ny ...
Tsy natao ho an’ny vehivavy ireny diaper ireny, satria miraikitra toy ny fehikibo manarona ny faritra mivonto. Mazava ho azy fa tsy natao hifoka ihany koa izy ireo (ny alika matetika dia tsy mandeha kibo amin'ny diaper raha tsy misy tsy fahampian-tsakafo), mipipy fotsiny. Tena mahazo aina izy ireo, satria azonao atao ny manitsy azy tanteraka amin'ny velcro, ary manana lamba roa sosona izy ireo mba hitazonana ny pipi. Ankoatra izany, dia misy amin'ny habe sy loko isan-karazany.
Diapers tokana ampiasaina ho an'ny lehilahy
Ny Amazon Basics dia manana vokatra tsara kalitao hatrany amin'ny vidiny lafo, toa an'ity fonosana misy diaper azo ampiasaina 30 ho an'ny alika lahy ity. Izy ireo dia azo amboarina amin'ny lafiny iray ho an'ny biby fiompinao, na dia tsy maintsy mahazo antoka ny habeny marina ianao amin'ny fijerena ny latabatra miaraka amin'ny fandrefesana sy ny habeny. Ny tsara amin'ity vokatra ity dia ny fiovan'ny lokony rehefa pipi ny alika, ka ho fantatrao avy hatrany raha tonga ny fotoana hanovana azy.
Fonosana Diaper Trixie Disposable
Trixie, marika alemana manampahaizana manokana amin'ny biby fiompy, dia manolotra ity fonosana mahaliana ity misy diaper ampiasaina tokana ho an'ny lehilahy. Izy ireo dia novolavolaina tamin'ny fanampian'ny veterinera, ankoatra izany, manana elastika izy ireo mba hampifanaraka azy ireo araka izay azo atao amin'ny andilan'ny alikanao., ankoatry ny fananana habe maromaro azo alaina. Ankoatra izany, dia ampiasaina ho an'ny pipi be dia be.
Diaper azo sasana ho an'ny vehivavy
FITIAVANA dia miahy...
Ohatra iray hafa amin'ny diaper ho an'ny alika, amin'ity tranga ity, ny vehivavy, izay mijaly noho ny tsy firaharahiana na efa tonga fotoana. Ity fonosana ity dia miaraka amin'ny diaper telo izay azonao sasana amin'ny tanana na amin'ny milina. Mifanaraka tsara izy ireo, satria manana tarika elastika sy velcro eo amin`ny lafiny roa, ary koa ny lavaka izay hahazoana ny rambony sy hahatonga azy ho aina araka izay azo atao. Farany, ity vokatra ity dia misy amin'ny modely sy loko isan-karazany.
Diaper super absorbent ho an'ny vehivavy
Ho an'ireo manana alika manana olana amin'ny tsy fahampian-tsakafo, aryIreo diapers azo ampiasaina amin'ny marika Trixie ireo dia mety tsara. Na dia milaza aza ny fanehoan-kevitra sasany fa somary ara-drariny ny habeny, ny rehetra dia manasongadina ny heriny lehibe mitroka, satria mitazona ny biby ho maina ary, mazava ho azy, tsy miditra. Misy lavaka lalovan'ny rambony ka mahazo aina kokoa izy ireo: mba hahazoana antoka fa tsy miala eo ny pipi ary manitsy azy tsara kokoa, dia apetaho amin'ny kasety adhesive kely ny sisiny roa amin'ilay lavaka (tandremo fa tsy hisambotra ny volo).
Underpads ho an'ny alika
Farany, vokatra iray izay tsy diaper mihitsy, fa zavatra tena mitovy: soak. Toy ny diaper azo ampiasaina amin'ny tany izy io mba hahafahan'ny alikanao manamaivana ny tenany ambony ary aza avela ho very daholo. Tsy mitroka tsara fotsiny izany, fa manana habe tsara sy adhesive efatra ahafahana manamboatra azy amin'ny tany sy manakana azy tsy hihetsika, ka hisorohana ny tahotra bebe kokoa. Araka ny voalazanay dia ampiasaina tokana izy ireo ary misy 30 isaky ny fonosana.
Inona no atao hoe diapers alika?
Heverinay fa tsy mila milaza aminao ny fampiasana ny diaper ho an'ny alika, na dia mety ho mahasoa ho an'ny mpiara-mitory voalohany amin'ny alika aza ny mahafantatra ny antony mety hahasoa ny fampiasana azy. Amin'ny toe-javatra rehetra anefa, Raha hitanao fa mitete ny alikanao dia ento any amin'ny veterinera mialoha mba hahazoana antoka fa mahazo fitsaboana tsara indrindra izy..
Diaper dia vita amin'ny fitaovana mahatohitra enta-mavesatra sy fofona. Izy ireo dia mifanaraka amin'ny vatan'ny biby fiompinao rehefa tonga amin'ny habe S, L ary XL izy ireo.
Zanaka mpitroka ultra ary samy misy ho an'ny lahy sy ny vavy, ampahany amin'ny mety amin'ny hafanan'ny vehivavy izany.
Ireo diapers ireo dia misy endrika azo ovaina amin'ny andilana amin'ny kasety adhesive mba hisorohana ny fihoaram-pefy. Mitresaka tanteraka ny ivony ary misy sisiny ahafahan'ny biby miaina tsy manelingelina azy.
Ny salanisan'ny faharetan'ny diaper alika dia enina ka hatramin'ny valo ora arakaraka ny habeny sy ny lanjany. Misy maodely azo ampiasaina sy azo ampiasaina indray, ity farany kosa tonga amin'ny fitaovana azo sasana na lamba miaraka amina pad anatiny hitazona entana.
Amin'ny fotoana voalohany andramo ataonao anaty alim-baravarana ny alikanao dia zava-dehibe tokoa ny manome azy io ho fofona, satria miankina amin'ny fahazoana antoka na manohitra ny fampiasana azy io.
Izany no antony torohevitra ny hanaovana an'io diaper voalohany io a traikefa nahafinaritra. Antsoy ny biby fiompinao ary manomboka milalao azy tampoka, avelao izy hamofoka ilay fitaovana ary hanomboka hametraka izany amin'ny tongony lamosina, avy eo amboary malefaka ireo fatorana amin'ny sisiny nefa tsy mandratra azy.
Amin'ny voalohany dia handeha am-pitandremana ianao noho ny fahatsapana fitaovana vahiny ao amin'ny vatanao, fa ho zatra tsikelikely izy.
Ho an'ny alika antitra
Rehefa mihantitra ny olona iray dia miseho ny aretina, zavatra mahazatra amin'ny olona sy ny biby. Ny alika efa ampy taona dia mety hivoaka ny urine, na satria sarotra ho azy ny mivoaka any ivelany mba hanamaivana ny tenany., satria tsy afaka mifehy koa izy ireo na noho ny antony hafa mifandraika amin'ny taona.
Ny tsy fitoniana urinary
Tsy fetezana urinary tsy miseho amin`ny alika antitra ihany, fa mety ho famantarana ny aretina izay mety hisy fiantraikany amin`ny karazana alika rehetra, ohatra, ny areti-mifindra, ny diabeta ... Araka ny voalazanay dia aza asiana diaper fotsiny ny alika fa ento any amin'ny veterinera izy mba hamaritana hoe inona no mahatonga ny incontinence ary inona no fitsaboana tsara indrindra.
Tahaka ny ilaina ny diaper rehefa mihalehibe ny alika, dia tena ilaina ihany koa izy ireo amin'ny fiandohan'ny fiainana. Azonao atao ny mampiasa azy ireo mandritra ny fiofanana, mba hisorohana ny biby fiompinao tsy hivoaka ny pipi sy hanakorontana azy, mandra-pianany mihazona.
Raha jerena ny fahasamihafana anatomika misy amin'ny alika sy ny alika vavy diapers no azo ovaina anatomika ho an'ny roa, Raha ny momba ny alika, ny fatorana miraikitra ary izay hita any amin'ny sisiny dia azo hitarina na ahena arakaraka ny sakan'ny refin'ny boribolin'ny alika, raha amin'ny vehivavy kosa dia azo ampiharina sy milamina kokoa izany.
Ho an'ny alika kely lahy dia mety izy ireo rehefa manomboka manala tena ao an-trano izy ireo; Ny fampiasana ny diaper dia misoroka ny fitsororohana ary manome antoka fa mora miova izy ireo mba hifehezana mandra-pahatongan'ny fotoana an-tongotra.
Vehivavy amin'ny hafanana
Ny diaper koa dia manakana ny vehivavy amin'ny hafanana tsy hamela tasy manerana ny trano, noho izany dia singa mahazatra ho an'ireo izay manana alika tsy voadio izy ireo, satria amin'izay no tonga ny fitsipika momba ny bitch.
Na ho an'ny alika Chihuahua, Labrador na Maltese, ny diaper alika dia tena ilaina amin'ny fomba fiaina mahasalama. Ka raha tompona alika ianao ary tsy fantatrao hoe ohatrinona ny vidin'ny diapers na ahoana ny fametrahana azy ireo, ny fomba tsara indrindra hahitana izany dia amin'ny fandinihana ny marika, ny karazany ary ny haben'ny biby fiompinao.
Ny haben'ny alikanao Tena ilaina ny mahita ny maodelin'ny diaper mety mifanaraka aminy. Mba hanaovana izany dia refeso ny andilan'ny biby fiompinao ary avy eo jereo ireo torolàlana momba ilay diaper mety.
Raha mitady diapra alika lehibe ianao dia afaka misafidy diaper alika habe L haingana.
Ny morphology an'ny alika dia tsy mitovy amin'ny lahy sy ny vavy, noho izany dia ilaina ny mandray ny firaisana amin'ny alika (lahy na vavy) mba safidio ny diaper izay mifanaraka tsara indrindra. Fivarotana biby fiompy dia manolotra diapia isan-karazany ho an'ny alika.
Karazana diapers alika
Eny an-tsena misy karazany roa lehibe ny diaper ho an`ny alika, izay mety ho tsara kokoa na ratsy kokoa araka ny filantsika.
ny diapers fanary mora vidy kokoa izy ireo, saingy noho izy ireo ampiasaina tokana, dia tena manimba ny tontolo iainana. Amin'ny lafiny iray, raha manana olana ny alikanao ka tsy maintsy manao diaper mandritra ny fotoana fohy, dia mety ho safidy hodinihina izy ireo.
ny diapers azo sasana Izy ireo dia vita amin'ny lamba ary izy ireo dia azo sasana. Na dia mahasosotra aza ny tsy maintsy mahafantatra ny fanasana azy ireo ary somary lafo kokoa noho ny fampiasana tokana izy ireo, ny marina dia tsara kokoa ho an'ny tontolo iainana izy ireo ary amin'ny farany dia mora kokoa izy ireo, satria mety ho mora kokoa. ampiasaina imbetsaka. Izy ireo dia mety tsara ho an'ny alika mila diaper maharitra.
Ho an'ny alika tsy mahazaka onitra
Raha mitady diaper ianao izay miaro ny biby fiompinao amin'ny tsy fanjariany mety hizaka azy ireo dia mamporisika anao izahay hikaroka ireo modely pataloha izay tsara tarehy, azo ampiharina ary malefaka.
Ity maodely ity dia iray amin'ireo fampiasan'ny alika kelyrehefa mifanaraka tsara sy misoroka ny raraka amin'ny tongony manify. Tadidio fa rehefa tsy mahazaka urinn ny alikao dia hanomboka hihiaka hatraiza hatraiza nefa tsy te-hanao izany, noho izany dia tokony hampiasa io diaper io izy.
Ity maodely ity dia manana ny mampiavaka azy manokana vita amin'ny lamba malemy be hanomezana fampiononana mety indrindra amin'ny biby fiompinao. Ankoatry ny halemem-panahiny dia ho gaga ianao amin'ny fanohanany tsara noho ny fikitika ny kalitao sy ny fahaizany miasa. Ka raha io no maodely notadiavinao dia azonao atao ny mividy azy eto.
Taratasy fanadiovana landihazo
Ho an'ny alika tsy mahomby na hafanana amin'ny hafanana, tsy misy tsara noho ireo pataloha fitondra fahadiovana ireo. Raha ny marina, ny fampiasana ara-pahadiovana an'ireo panty ireo dia afaka miaro ny tranonao; na ny sezanao io, ny gorodona na ny ondana.
Maodely madio sy milamina izy io, ankoatry ny hatsaran-tarehy ho an'ny biby fiompinao.
Mahafinaritra ny mitafy, ny alika anao dia handray azy avy hatrany noho ny fahalemeny. Ny tombony lehibe ananan'ireny panty ireny dia ny azy ireo Fanidiana ny velcro izay manome fiarovana tsara kokoa.
Zava-dehibe ny manomboka amin'ny fotoana voalohany itarihanao ny alikanao tsy hatahotra na tsy hanohitra ny fampiasana azy, arakaraka ny anaovanao azy, dia mora kokoa ny mampifanaraka azy ary amin'izay dia hahatsapa fampiononana lehibe rehefa mampiasa azy.
Ny habeny dia ampifanaraho arakaraka ny refin'ny refin'ny kibon'ny biby fiompinao, mety ho S, ML na XL. Raha fintinina, izy ireo dia torolàlana mahatalanjona izay tsy handiso fanantenana anao ary afaka misafidy azy ireo mora ianao amin'ny fikitihana eto.
Ny tsenan-diaper koa dia nitady fampiasana fitaovana mendri-kaja kokoa izay manohana ny fikolokoloana sy ny fitehirizana ny tontolo iainana Ary fisaorana rehetra noho ny fitaovana toy ny velcro dia nivadika ho mora vidy kokoa ny diaper.
Tokony ho ao an-tsaina fa ny zaza dia mampiasa diapia mihoatra ny 1000 amin'ny fiainany ary raha io tarehimarika io dia ampiantsika izao ny fampiasana ny lamba famaohana ho an'ny biby fiompy, ny isan'ny fitaovana atsipy any amin'ny faritra voajanahary dia hitombo be.
Amin'izay soso-kevitra ankoatran'ny fampiasana diapers ekolojika, lamba famaohana azo sasana, satria mampihena be ny fako. Ireo valin-drihana ireo dia amin'ny habe S, amin'ny mavokely na manga ary afaka mahita azy ianao Tsy misy vokatra..
Torohevitra rehefa manao diaper
Ny zava-misy Ny fametrahana ny diaper amin'ny alikantsika dia mety hampisafotofoto, farafaharatsiny amin'ny fotoana vitsivitsy voalohany. Noho izany dia mety hahasoa anao ireto torohevitra ireto:
Jereo ny habeny alohan'ny hividiananao azy ireo. Mety tsy mahazo aina ny diaper lehibe loatra na kely loatra.
Ataovy azo antoka fa ny vokatra marina, toy ny misy diaper ho an'ny lahy sy vavy ary miankina amin'ny karazany.
Si tsy mitazona tsara amin'ny toeranyEritrereto ny hividy karazana harness izay ampiasaina mba hifanaraka kokoa amin'ny diaper.
Ovay avy hatrany avelao ny biby fiompinao handoto azy. Ankoatra ny tsy mahafinaritra, ny mamela ny alikanao ao anaty diaper maloto dia mety hiteraka fahasosorana amin'ny hoditra.
Diovy ny fanambaniny mialoha sy aorian’ny fanoloana ny diaper azy amin’ny a lamba famaohana kely mando.
Ataovy zatra ny diaper izy mamela azy hanimbony azy sy hanome azy sakafo araka izay anaovanao azy.
Aiza no hividianana diapers alika
Misy toerana maro samihafa ahafahanao mividy diapers alika, na any amin'ny magazay manokana na ankapobe.
Voalohany indrindra, amin'ny Amazon Hahita diaper maro isan-karazany ianao, manomboka amin'ny fanariana ka hatramin'ny azo sasana, ho an'ny vehivavy, lahy ... ary koa, raha nanao fifanarahana tamin'ny Prime service ianao dia ho azonao ao an-trano ao anatin'ny fotoana fohy.
Ny iray amin'ireo toerana mahazatra indrindra hividianana ity karazana vokatra ity dia ny magazay an-tserasera ho an'ny biby toy ny Kiwoko na TiendaAnimal. Tsy vitan'ny hoe manana vokatra avo lenta izy ireo any, fa afaka manoro anao koa izy ireo raha ilaina.
Farany, amin'ny sasany mpitsabo biby Manana diapers sy pad koa izy ireo. Na dia iray amin'ireo toerana lafo vidy kokoa aza izy io, dia io ihany koa no ahafahan'izy ireo manoro hevitra anao bebe kokoa, satria matihanina izy ireo.
Manantena izahay fa nanampy anao hahita ny diaper alika tonga lafatra ho an'ny biby fiompinao. Lazao anay, efa nilanja azy ve ny alikanao? Manana tetika ve ianao hametrahana azy ireo na hanala azy ireo? Karazana diaper inona no tsara indrindra ho anao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fitaovana alika » Ny diaper alika tsara indrindra amin'ny toe-javatra rehetra